Malunga nathi -I-OYE SHOWCASE CORPORATION LIMITED
Ukuqwalaselwa kweenkcukacha kunye nokuQiniseka okuQinisekileyo
Iimveliso zecala lokubonisa eziyilwe liqela labaqulunqi abaphambili kunye nenoveli ngesitayile, izixhobo zemveliso eziphambili zenza ukuba amandla emveliso abe namandla kakhulu, kwaye inkqubo yolawulo lwemveliso engqongqo iqinisekisa umgangatho weemveliso.
Ukuhanjiswa okukhawulezayo kuwufinyeza kakhulu umjikelo wokuvula weevenkile, kwaye izibonelelo zezinto ezibonakalayo zenza ukuba amaxabiso ethu afaneleke kwaye abenakho ukwenziwa ithuba lokwandisa izivumelwano kubathengi.
Siqokelele iqela lamaqela emveliso abanamava nabanezakhono.Sihlala sibambelela kumoya wobuvulindlela kunye nokungenzi nto, kwaye silwela ukugqwesa kwimveliso.
I-OYE SHOWCAES CORPORATION LIMITED ikhetheke ngokukodwa ekuveliseni izinto ezivenkileni, ezivenkileni, kwimiboniso nakwizinto ezizodwa kubathengisi bamanye amazwe, abathengisi abathengisa elizweni jikelele, abangenisa elizweni.Sisebenzisene nabathengi abangaphezulu kwe-110 abavela eYurophu, e-USA, e-Australia nase Mzantsi Melika.
Kwaye sisebenze kunye neempawu ezaziwayo kwihlabathi liphela, ezinje ngo-Triumph, MauiJim, Bulova, Tiffany, Charlotte Tibury, Citizen, Raymond Weil ect Emva kweminyaka engaphezu kwe-13 yophuhliso, sinamava atyebileyo kwintengiso nasemva kwenkonzo yokuthengisa. yenza indawo yokugcina ivenkile kwaye ikubonise umboniso ngamnye. Zisa nje iingcinga zakho okanye umzobo, masenze konke okunye. Siza kujonga yonke into kuyilo, ukuvelisa, ukuvavanya ukuthunyelwa.
Faka iodolo namhlanje, kwaye siza kuyithumela kuwe malunga neentsuku ezingama-30.
Uhlobo lweShishini Umenzi
Ilizwe / Ummandla Guangdong, China
Ubungakanani beFektri Iimitha zesikwere ezingama-5,000-10,000
Iimveliso eziphambili imiboniso, izixhobo zevenkile, iindawo zokubonisa, izixhobo zokubala zeglasi
Ukwenziwa kwesivumelwano Inkonzo ye-OEM
Abasebenzi xa bebonke Abantu abangama-51-100
Imveliso yeeLines 5
Ingeniso yonyaka iyonke I-US $ 2.5 yezigidi- i-US $ 5 yezigidi
Unyaka oMiselweyo 2017
Iimakethi eziphambili Emantla Yurophu 18.00%
Intshona Melika 15.00%
Iiglasi zethu zokubonisa zilungile ukubonisa imibhobho yokutshaya kunye nomphunga. Abathengi badibanisa izinto zokubala nganye nganye kwaye babeke iimveliso zabo ezintle ezishelfini kwaye abathengi ikakhulu bathi "ibukeka intle kakhulu"
Masiqale sithethe ngeprojekti yakho